Imozulu eMoscow - Januwari 2018: Isibikezelo esifanelekileyo kwiziko le-Hydrometeorological Centre
Kwiholide zeKrisimesi neEpiphany kukulungele ukuhlala e-megalopolises njengeMoscow. Ngeli xesha, zonke iivenkile, izindlu zezixeko ezinkulu zihlotshiswe ngezibane ezikhanyayo. Iingxowa zenziwa kwizitratato nakwiindawo zokuthengisa. Kwaye ukuze uceba kakuhle iholide ekuqaleni okanye ekupheleni kukaJanuwari, kufuneka ufunde iziganeko ezichanekileyo zezulu. Thina kule nqaku sibonise idatha ye-Hydrometeorological Service. Ngosizo lwabo unokufumana ukuba imozulu eMoscow iya kuba njani ngoJanuwari 2018 ukuqala nokugqiba. Kwakhona, siza kukuxelela ukuba yintoni imvula enkulu kwisifunda saseMoscow ngenyanga yokuqala yonyaka omtsha.
Ingaba njani iimozulu eMoscow ngoJanuwari 2018 kuba yiyona ndlela-eyona ndlela ichanekileyo yokuqala nokuphela kwenyanga
Ukufumana ixesha elifanelekileyo lokuphumula kunye nokuphumla kunye nosapho kuya kunceda ukufunda ababikezeli bemozulu ekuqaleni nasekupheleni kwenyanga. Ngezantsi siye sabonisa isimo sezulu esichanekileyo seMoscow ngoJanuwari ka-2018. Ukushisa okuqhelekileyo ekuqaleni kukaJanuwari 2018 eMoscow kuza kuba malunga -8 degrees. Kodwa kufuphi nephakathi kwenyanga, iya kuphakama kancane kwaye ibe malunga ne -5 degrees. Ekupheleni kukaJanuwari ngo-2018, kulindeleke ukuba i-snap ebandayo ilandelwe eMoscow. Iqondo lokushisa eliphakathi kwemini li--10 degrees. Ebusuku, iya kuhlahlela kwi--14 no -15 degrees.
Imozulu echanekileyo eMoscow ngoJanuwari 2018 evela kwiziko le-Hydrometeorological - izibikezelo zenyanga yonke
Kuwo wonke uJanuwari 2018, i-Hydrometeorological Service ibikezela imozulu yomsindo eMoscow. Ngako oko, abahlali kunye neendwendwe zentlanzi kufuneka bazilungiselele kakuhle ngokubanda kakhulu kwangoko ngo-2018. Ngokweziganeko zeNkonzo ye-Hydrometeorological Service, ngoJanuwari 2018, iMoscow iya kubakhoka. Phantse yonke imihla edolophini kuya kubakho imvula: ikhefu elifutshane elifutshane elifutshane kunye neeholide ezikhoyo.
Imozulu echanekileyo kwingingqi yaseMoscow ngoJanuwari 2018 - ukubonelelwa kwenyanga
Abemi baseMoscow badla ngokuchitha iholide yeKrisimesi kwinqununu. Kodwa ukwenza uhambo ukuya kwi-metropolis, banconywa ukuba bafunde ukubikezela kwemozulu eMoscow nakummandla waseMoscow ngo-Januwari 2018. Isibikezelo sezulu kwisithili saseMoscow asifani ncinane kwinqanaba le-capital. Izakhamuzi zommandla kufuneka zilungiselele ukushisa kwama--8 no -10 degrees. Kwakhona, imvula yamanzi ifana kulindeleke kuyo yonke inyanga. Ngoko ke, uhambo lukaJanuwari kufuneka lucwangciswe ngqalelo ekhethekileyo. Emva kokuba ufunde iziganeko ezichanekileyo zemozulu ezivela kwiziko le-Hydrometeorological Centre, unokukwazi ukwenza isicwangciso salo lonke uJanuwari 2018. Siqokelele iinkcukacha eziphambili ngokubanzi nasekuqaleni kwenyanga. Baya kunceda bonke abahlali belikhulu kunye nezixeko ezikufuphi ukuba zikhethe ixesha elifanelekileyo leeholide zabo. Bamele baqwalasele ukuba imvula ebanda eMoscow ngoJanuwari 2018 iyaqala kwaye iphelile. Kule meko, imvula epholileyo kunye neyoqhopholo iya kubonwa kwi-megalopolis nakwimimandla yaseMoscow.
Yintoni oyenzayo ngomhla weValentine, ukuba ungekho indoda?
I-Hip-hop - udaniso othandekayo wolutsha lwangoku
Ungayisebenzisa njani iholide esebenzayo eMoscow?
Imikhwa efanelekileyo eyingozi kwimpilo
Xa "uLwesihlanu oMnyama" uqala ngo-Russia?
Kulula kangakanani kwaye kukuhle ukuhlobisa itafile yonyaka omtsha
Indlela yokuhlambulula indlu embi?
I-Cocktail "I-cocoa ne-ayisikrimu"
Iintlobo zezityalo zasekhaya kunye nokunyamekela
Umdlali ongumdlalo ogqithisileyo u-Olga Krasko